(1) မထိခိုက်ဘူးနှင့် (2) ဖြစ်နိုင်ခြေအကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှပျက်ဆီး minimize: အဆိုပါ Belmont အစီရင်ခံစာကောင်းတဲ့၏နိယာမသုတေသီများသင်တန်းသားများရှိသည်အနေနဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းကိုစောဒကတက်သည်။ အဆိုပါ Belmont အစီရင်ခံစာဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်အတွက် Hippocratic အစဉ်အလာရန် "ထိခိုက်စေပါဘူး" ၏စိတ်ကူးနှင့်ပတ်သက်နှင့်သုတေသီများ "မသက်ဆိုင်အခြားသူများလာအံ့သောငှါအကျိုးကျေးဇူးများ၏လူတစ်ဦးထိခိုက်မဖြစ်သင့်" တဲ့ခိုင်မာတဲ့ form မှာဖျောပွနိုငျ (Belmont Report 1979) သို့သော် Belmont အစီရင်ခံစာလည်းအကျိုးရှိသည်အဘယ်အရာကိုသင်ယူအန္တရာယ်တချို့လူတွေကဖော်ထုတ်ပါဝင်စေခြင်းငှါအသိအမှတ်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်, အန္တရာယ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး၏အရေးကြီးသောရံဖန်ရံခါကပါဝင်ပတ်သက်အန္တရာယ်များကြားမှအခြို့သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဟာတရားမျှတသည့်အခါ "အကြောင်းကိုခက်ခဲဆုံးဖြတ်ချက်များစေရန်သုတေသီများဦးဆောင်လေ့လာသင်ယူဖို့အလွန်အရေးကြီးသည်နှင့်အတူပဋိပက္ခအတွက်ဖြစ်နိုင်ပြီး, အခါအကြိုးခံစားခှငျ့ကြောင့်၏လွှတ်ရပါမည် အန္တရာယ်များ " (Belmont Report 1979) ။
တစ်ဦးစွန့်စား / အကျိုးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့အန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်အနေနဲ့သင့်လျော်သောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာချိန်ခွင်လျှာဒဏ်ခတ်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်: အလေ့အကျင့်၌, ကောင်းတဲ့အ၏နိယာမသုတေသီများနှစ်ခုသီးခြားလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ရန်သင့်ကြောင်းဆိုလိုဘတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအကြီးအကျယ်ထိရောက်သောကျွမ်းကျင်မှုလျော့နည်းတန်ဖိုးရှိသော, ဒါမှမဟုတ်ပင်ထိခိုက်စေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်တစ်ခုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်ပါသည်စဉ်ဤပထမဦးဆုံးဖြစ်စဉ်အကြီးအကျယ်ထိရောက်သောကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်မယ့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကအန္တရာယ် / အကျိုးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနားလည်မှုနှင့်တစ်ဦးလေ့လာမှု၏အန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်တိုးတက်အောင်နှစ်ဦးစလုံးပါဝငျသညျ။ ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ထိုဖြစ်ရပ်များ၏ပြင်းထန်မှု: အန္တရာယ်၏ analysis ဒြပ်စင်နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်သည်သငျ့သညျ။ ဒါကြောင့် (ဥပမာ, အောင်ဖြစ်ပေါ်လျှင်အန္တရာယ် / အကျိုးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရလဒ်အဖြစ်တစ်သုတေသီ (ဥပမာ, အားနည်းချက်နေသောသင်တန်းသားများကိုထွက်ပြ) တစ်ခုဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်၏ပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချဖို့လေ့လာမှုဒီဇိုင်းကိုချိန်ညှိနိုင် ဒါကြောင့်ကိုတောင်းဆိုတဲ့သူသင်တန်းသားများကိုရရှိနိုင်အကြံပေးခြင်း) ။ ထို့ပြင်အန္တရာယ်ကို / အကျိုးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ်အတွင်းသုတေသီများစိတ်တွင်ပါဝင်သူအပေါ်, ဒါပေမယ့်လည်း nonparticipants နှင့်လူမှုရေးစနစ်များမယ့်သူတို့ရဲ့အလုပ်၏သက်ရောက်မှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt အားဖြင့်စမ်းသပ်မှုစဉ်းစားပါ (2012) ဝီကီပီးဒီးယားအယ်ဒီတာများ (အခန်း4မှာဆှေးနှေး) ရက်နေ့မှာဆု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်။ ဒီစမ်းသပ်မှုမှာသုတေသီများသူတို့ထိုက်တန်ဟုယူဆပြီးတော့သုတေသီတစ်ဦးချီးမြှင့်ပေးဘူးဘယ်သူကိုမှအညီအမျှထိုက်သောအယ်ဒီတာများ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုအုပျစုနှငျ့နှိုငျးယှဉျဝီကီပီးဒီးယား၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးမှုများကိုခြေရာခံတော်မူသောအယ်ဒီတာများ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ဆုကိုပေးတော်မူ၏။ မြင်ယောင်ကြည့်ပါလျှင်အစားဆု၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကပေးကမ်းခြင်း, Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt အများကြီးဆုနှင့်အတူဝီကီပီးဒီးယားရေလွှမ်း။ ဒီဒီဇိုင်းကိုမဆိုတစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူမထိခိုက်ပေမဲ့, ကဝီကီပီးဒီးယားထဲမှာတစျခုလုံးကိုဆုချီးမြှင့်ဂေဟစနစ်နှောင့်အယှက်နိုင်ဘူး။ တစ်ဦးစွန့်စား / အကျိုးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်နေသည့်အခါတစ်နည်းအားဖြင့်, သင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သင်တန်းသားများပေါ်ပေမယ့်ကမ္ဘာကမဖွင့်သင့်ရဲ့အလုပ်၏သက်ရောက်မှုကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
အန္တရာယ်များလျော့ချခဲ့ကြခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ A မြင့်ဆုံးတစ်ချိန်က Next ကို, သုတေသီများလေ့လာချက်တစ်ခုအဆင်သင့်ချိန်ခွင်လျှာရိုက်ရှိမရှိအကဲဖြတ်သင့်ပါတယ်။ Ethicists ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးအမြတ်၏ရိုးရှင်း summation အကြံပြုကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့်အချို့အန္တရာယ်များကိုအဘယ်သူမျှမ (ဥပမာ, အ Tuskegee ဆစ်ဖလစ်လေ့လာမှုသမိုင်းနောက်ဆက်တွဲတွင်ဖော်ပြထား) အကျိုးကျေးဇူးများအရေး impermissible သုတေသနဆပ်။ အဓိကအားဖြင့်နည်းပညာပိုင်းသောစွန့်စားမှု / အကျိုးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, မတူဘဲ, ဒီဒုတိယခြေလှမ်းနက်ရှိုင်းစွာကျင့်ဝတ်နှင့်အတကယ်တော့သီးခြားဘာသာရပ်-ဧရိယာကျွမ်းကျင်မှုမရှိကြပါဘူးသူတွေကိုအားဖြင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံလိမ့်မည်။ အပြင်ကလူမကြာခဏအတွင်းကနေကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုသတိထားမိသောကြောင့်, တကယ်တော့, United States မှာ IRBs အနည်းဆုံး nonresearcher ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ဦး IRB အပေါ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ငါ၏အတှေ့အကွုံမြားတှငျဤအပြင်ကလူအုပ်စုတစ်စု-ထင်တားဆီးဘို့အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သုတေသနစီမံကိန်းအတွက်သင့်လျော်တဲ့စွန့်စားမှု / အကျိုးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရိုက်ရှိမရှိဒုက္ခဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိခြင်းလျှင်ရုံတချို့ nonresearchers တောင်းဆိုနေတာကြိုးစား, သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်မမေးကြဘူး; သူတို့ရဲ့အဖြေကိုသင်အံ့သြသွားပေလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်စဉ်းစားသောဥပမာသုံးခုကိုမှကောင်းတဲ့အ၏နိယာမလျှောက်ထားခြင်းဟာသူတို့ရဲ့စွန့်စားမှု / အကျိုးအတွက်ချိန်ခွင်လျှာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းငှါအချို့အပြောင်းအလဲများကိုအကြံပြုထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်ထဲမှာ, သုတေသီများအသက် 18 နှစ်နှင့်ကုသမှုမှဆိုးဆိုးရွားရွားတုံ့ပြန်ရန်အထူးသဖြင့်ဖွယ်ရှိစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်လူတွေအောက်မှာကလူထွက်မျက်နှာပြင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ (အခန်း4မှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့), သူတို့ကအစထိရောက်စာရင်းအင်းနည်းလမ်းများ အသုံးပြု. သင်တန်းသားများ၏နံပါတ် minimize လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်သင်တန်းသားများကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့နှင့်ထိခိုက်ခဲ့ကြသည်ထင်ရှားကြောင်းမည်သူမဆိုမှအကူအညီများပူဇျောပါပွီနိုင်ဘူး။ သူတို့က data တွေကိုဖြန့်ချိသည့်အခါ (မိမိတို့အလုပျထုံးလုပျနညျးသူတို့ထိုအချိန်ကဘုံအလေ့အကျင့်များနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းကိုအကြံပြုထားတဲ့ဟားဗတ်ရဲ့ IRB, ကအတည်ပြုခဲ့ကြသည်ပေမယ့်) အရသာ, ဆက်ဆံရေးနှင့်အချိန်မှာသုတေသီများအရပျ၌အပိုအကာအကွယ်ထားကြပြီနိုငျဘဲ, ငါအချက်အလက်ဆိုင်ရာအန္တရာယ် (အပိုင်း 6.6.2) ကိုဖော်ပြရန်သောအခါငါနောက်ပိုင်းမှာ data တွေကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ပိုပြီးတိကျတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Encore ထဲမှာ, သုတေသီများစီမံကိန်းများ၏အတိုင်းအတာရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာဖန်ဆင်း, သူတို့သည်ဖိနှိပ်အစိုးရများအနေဖြင့်အန္တရာယ်အရှိဆုံးနေသောသင်တန်းသားများကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပါပြီနိုင်ကြောင်းအန္တရာယ်များတောင်းဆိုမှုများ၏နံပါတ် minimize လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဤအဖြစ်နိုင်သမျှပြောင်းလဲမှုများတစ်ခုချင်းစီသည်ဤစီမံကိန်းများ၏ဒီဇိုင်းသို့ trade-off မိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မယ်, ငါ့ရည်မှန်းချက်ကဤသုတေသီများဤပြောင်းလဲစေပြီသင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်မဟုတ်။ အဲဒီအစား, ကကောင်းတဲ့အ၏နိယာမအကြံပြုနိုငျသောအပြောင်းအလဲများအမျိုးမျိုးကိုပြသရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ယေဘုယျအားဖြင့်အန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များအလေးချိန်ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေတော်မူပြီဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်, ကတကယ်လွယ်ကူသုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်၏အကျိုးကျေးဇူးများတိုးမြှင့်ဖို့အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ အထူးသဖြင့်, ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်များ၏ tools များကိုအလွန်သုတေသီများသည်အခြားသုတေသီများ၎င်းတို့၏သုတေသနပြုအချက်အလက်များနှင့်ကုဒ်ရရှိနိုင်ပါစေနှင့်ပွင့်လင်း access ကိုထုတ်ဝေမှတဆင့်၎င်းတို့၏စာတမ်းများမရရှိနိုင်ပါစေဘယ်မှာပွင့်လင်းခြင်းနှင့် reproducible သုတေသနလွယ်ကူချောမွေ့။ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် reproducible သုတေသနမှဤပြောင်းလဲမှုမရှိအားဖြင့်ရိုးရှင်းတဲ့ဆိုလိုတယ်နေစဉ်မည်သည့်အပိုဆောင်းအန္တရာယ်မှသင်တန်းသားများကိုဖော်ထုတ်မပါဘဲ၎င်းတို့၏သုတေသနပြုမှု၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးမြှင့်ဖို့သုတေသီများဘို့လမ်းကိုကမ်းလှမ်း (Data ခွဲဝေမှုအပိုင်း 6.6.2 ထဲမှာအသေးစိတ်ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မည်သည့်ချွင်းချက်ဖြစ်ပါသည် ) အချက်အလက်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်ပေါ်မှာ။